Malunga nathi - uSuzhou Marcospa
USuzhou Marcospayasekwa ngo-2008. Ingcali kwimveliso kumatshini floor, ezifana grinder, ipolishi kunye nomqokeleli uthuli. Iimveliso ezikumgangatho ophezulu, ezisefashonini, ezisetyenziswa ngokubanzi kwiintlobo ngeentlobo zokwakha, ayisiyiyo nje kuphela inyambalala ebanzi yentengiso yasekhaya, kodwa ithunyelwa eYurophu naseMelika.
Ihinji kaMarcospa kule minyaka ihleli ibambelele "kumgangatho weemveliso ukuze uphile, ukuthembeka kunye neenkonzo zophuhliso" ngeenjongo zeshishini. Ukuzibophelela ekuboneleleni ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu kunye neenkonzo ezisemgangathweni. Yiba neqela elilawulayo, elizinikeleyo kwiqela lolawulo loyilo, kuyilo lweemveliso, ukwenziwa kwesikhunta, ukubumba kwindibano yeMveliso, kwinkalo nganye kunye neenkqubo kuvavanywa ngokungqongqo kunye nolawulo.
Kule minyaka imbalwa idlulileyo yemveliso kunye nolawulo kunye nokuhlola, iMarcospa iseke eyayo inkqubo yolawulo lomgangatho. UMarcospa uhlala ephumeza umxholo wokudalwa kwexabiso labathengi ukulungiselela iimveliso ezilungiselelwe ukuhlangabezana neemfuno zabathengi abohlukeneyo, kwaye ngokuqhubekayo ukubonelela abathengi ngezisombululo kunye neengxaki zobuchwephesha. Ukuqhubeka kokuhlola kunye nokwenza izinto ezintsha, kunye nokugqwesa.
Sidlulile ukuqinisekiswa kwenkqubo esemgangathweni ye-ISO9001, kwaye ezinye iimveliso zigqithile kwizatifikethi zaseYurophu. Ukuze kuqinisekiswe ukuqhubekeka kwemveliso kunye nenkonzo yasemva kokuthengisa, iqela loyilo kunye neenjineli zenkonzo emva kokuthengisa ziye zaqeqeshwa ukwenza uphando ngobungcali kunye nokuphuhlisa, ukuyila, kunye nokuvelisa ingqokelela yothuli kunye nezixhobo zokususa uthuli. Ishishini lokudibanisa umsi nolawulo lothuli, noluhlu olupheleleyo lweemveliso, ezinokuhlangabezana nazo zonke iimfuno ezijikelezayo zenkqubo yemveliso, kunye nokubonelela ngesisombululo esipheleleyo. Iimveliso zeMaxkpa zihlangabezana nemithetho eyahlukeneyo yezokhuseleko kunye nezalathi. Iimveliso ziye zavavanywa zaqinisekiswa ngamaziko aphesheya. Abathengi babonelela ngesiqinisekiso sokhuseleko kwimveliso yoshishino.
Uthotho lwemveliso yangoku lubandakanya izinto zokucoca umatshini, abaqokeleli bothuli bemizi mveliso, abacoca umsi womoya, izixhobo zokucoca ukuqhushumba, izixhobo zokuxhasa uthuli kunye notshintsho kufakelo, iinkqubo ezixhasa izixhobo kunye nezinye izisombululo zokususa uthuli. Iimveliso zeIngmar zisetyenziswa kakhulu ekusetyenzisweni kwesinyithi, izixhobo zoomatshini, ukwenziwa kwezithuthi kunye neenqanawa, amayeza kunye nokutya, iimpahla zokuthintela, imichiza emihle, ukuhamba ngenqwelomoya kaloliwe okhawulezayo, ubungqina bokudubula kunye namanye amashishini!
Wamkelekile ngokufudumeleyo kwaye uvule imida yonxibelelwano. Sivumelanisa neqabane lakho elifanelekileyo!